Guddiga difaaca baarlamaanka Kenya oo ku baaqay in dib loo bilaabo dhismaha darbiga - Halbeeg News
MANDHEERA(HALBEEG)- Guddiga difaaca ee baarlamaanka Kenya ayaa soo dhaweeyay dhismaha darbiga laga dhisayo xuduudda Kenya iyo Soomaaliya.
Xubnaha guddiga oo ay wehliyaan siyaasiyiin ayaa booqasho ku tagay magaalada Mandheera oo ku dhow xuduudda Kenya iyo Soomaaliya.
Sida uu baahiyey wargeyska Star ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa lagu sheegay in hadafka booqashada guddiga difaaca ee baarlamaanka Kenya ay ahayd in ay qiimeyn ku sameeyaan howsha dhismaha darbiga laga dhisayo xuduudda Kenya iyo Soomaaliya.
Dhismaha darbigan ayaa ka kooban darbi dheer, xarko koronto ku shaqeeya iyo qalab casri oo lagu ilaalinayo xuduudka.
Guddoomiyaha guddiga difaaca baarlamaanka Kenya, Katoo Ole Metito oo la kulmay dadka deegaanka ayaa ku baaqay in dib loo bilaabo dhismaha darbiga laga dhisayo xuduudda ee dowladda Kenya ay ku sheegtay in ay ku sugeyso ammaanka dalkeeda.
Injineerro Kenyaan ah ayaa sheegay in 12 KM oo kamid ah darbigan la dhisay sanadkii lasoo dhaafay waxa ayna intaasi ku dareen in ay kalsooni ku qabaan in la dardar gelin karo dhismaha darbiga.
Kulan guddiga ay la yeesheen guddoomiyaha is maamulka Mandheera, Kutswa Olaka ayaa sheegay in wasiirrada arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo Kenya ay ka wada hadleen dhismayaasha qaar oo si sharci darro ah looga dhisay soohdinta ay wadaagaan labada dal.
Mid kamid ah dadka deegaanka oo magaciisa lagu sheegay Suleymaan ayaa carrabka ku dhuftay in ammaanka xudduudda uu soo hagaagay kadib dhismaha darbigan.
“Sanadkii la soo dhaafay wax weerar ah ma dhicin, markii hore waxaa dhici jiray toban weerar isbuuciiba” ayuu yiri Suleymaan.
Dhawaan, xildhibaanka laga soo doorta bariga Mandheera, Cumar Sala ayaa baarlamaanka Kenya u gudbiyay qoraal looga dalbanayo in ay meel mariyaan hindise ciidamada Kenya looga soo saarayo gudaha Soomaaliya.
Guddiga doorashada Koonfur Galbeed oo lagu dhawaaqay